Jawaab: USC IYO AQOONSIGA SOMALILAND (Faallo gaaban)
Waxaa qoray: Cumar Cabdinuur Nuux (Nabaddoon)
Mahad Ilaahii Soomali abuuray baa iska leh, Naxariis iyo Nabadgelyana Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato. Intaas kadib Soomaali idilkeed waa salaamantihiin.
Waxaa maalmahaan dood ka taagnayd laba arrimood oo midnimada ummadda Soomaaliyeed taabana. Midi waa aqoonsi lasheegay in USC siisay Jabhadda SNM ee gobolada waqooyi Somaliya maamusha. Midda kalana waa baaq kasoo yeedhay ninka layiraahdo Faysal Cali Waraabe oo madax ka ah qeyb kamid ah Jabhaddaas SNM.
Waxaan jeclahay inaan uga hadlo qormadeydaan gaaban dhowr arrimood oo muhim ah.
1. Baaqa la sheegay in uu ka soo yeeray USC
2. Aqoonsiga Somaliland
3. Heshiisiinta beelaha USC ee ururka UCID ku hawlanyahay.
1. Baaqaan la sheegay in uu ka soo baxay Halgamayaashii USC, ee lagu aqoonsanayo goosashada SNM ee gobolada waqooyi waa mid been abuur ah sida qaar ka mid ah raggii ku qornaa baaqaas ay caddeeyeen in aysan waxba ka ogeyn arintaas, ayna tahay mid lagu been abuurtay. Ragga arrintaas been abuurka ah lagu sameeyey waxaa kamid ah Col. C/laahi Black oo ahaan jiray Xoghayaha arrimaha ciidamada ee ururkii USC. Ninkaasi wuxuu wareysi lalayeeshay ku qiray in uusan arrintaas waxba kala socon aysanna ka suurtoobin nin wax garad ah oo Soomaali ah in uu waqtigaan lagu jiro qoraalkaas oo kale ka qeybqaato. Halkaan hoose ka akhriso warbixintiisii:
Col. C/llaahi Max’uud Samatar (Black) oo ahaa xoghayihii gaashaandhiga ee ururkii USC ayaa si kulul u beeniyay qoraal lagu soo daabacay bogga Somaliland news oo lagu sheegay in 9 xubnood oo lagu magacaabay golaha halgamayaasha USC oo uu isagu ka mid ahaa ay aqoonsadeen madax banaanida maamulka la baxay Somaliland.Col. Black oo saaka u waramayay boggan Dayniile ayaa ku tilmaamay arrintaasi been abuur la dhoodhoobay, isaga oo gaashaanka ku dhuftay in ay jirto aqoonsi la aqoonaday maamulka la baxay Somaliland.“Ma garanayo meesha ay ka keeneen magaceyga, waxeyna igu noqotay filan waa, waana la yaabay markii aan qoraalkaasi ku arkay magaceyga, ragga liiska ku qorana waxaa isugu kaaya dambeysay 2001-dii” ayuu yiri Black oo talaabadaasi ku tilmaamay masabid. “ Wax aan wax ka ogahay ma ahan qoraalkii ku soo baxay bogga Somaliland news, mana ahan in been abuur la sameeyay lagu raadiyo Aqoonsi, waxaana anigu aaminsanahay Midnimada Soomaaliya” ayuu yiri Col. Black.
Sida ku cad wareysiga Col. Black baaqaas wuxuu ahaa mid la been abuurtay. Waxaase wax lala yaabo ah sida rag waxgarad ah oo aqoonyahan ah sida C/fataax Caraalle oo aan uga baranay in uu Madrasa India nooga soo tabiyo nolosha iyo dhacdooyinka ku saabsan caalamka Islaamka gaar ahaan Soomaalida wax ku barata India in uu gees ka raaco caadifada iyo baroordiiqda ay ku sifoobeen Maxamed Diridaba iyo ragga la ayniga ah (nooca ah). Haddaba baaqaas waa been abuur, aqoonsina ma keenayo ee yaan sharafta la iska qaadin dadka iyo dalka Soomaaliyeedna loo gefin. Gef iyo waxyeello intii horaa noogu filan!!
2. Aqoonsiga Somaliland laba mid uun buu ku imaan karaa:-
b. Waa midda horee, Soomaalida oo inta shirta, meel wada fariisata kadibna isla garata in Somaliland dawlad gaar ah loo aqoonsado. Waayo Somali Rebuplic hal xudduud ayaa loo aqoonsan yahay, hal calan iyo hal magac ayaa ka dhexeeya. Yaan lagu kadsoomin magacyadaan jabhaduhu la baxeen. Qarankii Soomaaliyeed adduunku deyn iyo heshiisyo ayuu ku leeyahay ama la galay, yaa loo raacanayaa aan idin weydiiyee qolooyinkiinaan reer Somaliland haddii aad iska dhaqaaqdaan ma Koonfurta ayaad ku reebeysaan oo inta Somalia u bixisaan ayaad uga tegeysaan wixii qaan lagu lahaa Somali Republic? Haddaba waxaa habboon inta kayn cidlaa la jafayo, haddii aqoonsi iyo gooni isutaag ay idinkaga dhegtay inaad marka hore Somalida oo dhan meel wax kulaqaybsataan, la shirtaan, dhibka iyo is fahanwaaga jira wax kadhammeysaan, kadibna wixii xuquuq ah oo idinka maqan ama la idinka duudsiyey aad goobta shirka uga gorgortantaan. Tan ayaa ka sahlan, ka dhaw kana sharaf badan ismaqiiqaan iyo xoog wax ku raadin. Timirtii horeba dab loo waa ayey Soomalidu tiraahdaa, oon uga jeedo Soomaali xoog iyo isxaqirid wax ku kala qaadi weyday ee ilbaxnimo iyo wadahadal amaa lagu dayaa!!
t. Midda kale ee Somaliland ku go’i kartaa waxay tahay: Dagaallada Sokeeye ee Koonfurta ka jira oo sii dabo dheeraada, taas oo ina dhaxalsiisa in midnimadii Jamhuuriyaddii Soomaaliya haadaan kasii dhacdo, SNM iyo xisbiyada matalaana ku dawarsadaan jabka iyo waxyeelada gaadhay walaalahood reer Koonfur sidaasna aqoonsi caalami ah ku helaan, waana tan qolyaha u ololeeya goosashada gobolada waqooyi ay had iyo jeer doorbidaan kuna dadaalaan. Waatan Adna iyo Somaliland Forum ku beer-laxowsadaan waddamada deriska iyo dawladdaha adduunka oo dhan
3. Heshiiska UCID iyo Faysal Cali Waraabe ugu baaqay beelaha Hawiye: Waa mid soo dhaweyn mudan, waxaanse ka baqayaa in uu yahay “Hadal san oo hadaf xun loola jeedo” waayo hadduu cidaan Faysal Cali Waraabe aheyn kasoo yeeri lahaa wuxuu ahaan lahaa loo qaateen, waxaase amakaag iyo yaab ku noqday Soomaalidii la socotay hadaladii Faysal hore uga soo yeeray ama mowqifkii lagu aqoon jiray ee ahaa “Wiil Koonfureed waxaa iiga dhow wiil Xabashiyeed” in uu maanta yiraahdo wiilal Koonfureed baan heshiisiinayaa!! Waa arin ujeeddada ka danbeysa caruurtu garan karto, kuna saleysan labada qodob ee Somaliland ku go’i karto kan danbe. Nin baa waxaa laga sheegay “ Maxaa Caruurta xumaha baray samahana gees marshay” oo ay had iyo jeer wax u ba’shaan. Maxaa Faysal u diiday in uu labada weji midka wacan qaato, Soomaali oo dhanna meel lagu ballamo, wixii laga badin waayana lagu heshiiyo?
Gunaanad iyo talo waxaan ku bixin lahaa:
. Ninkii dhib Soomaaliyeed ku faraxsan ha ogaado in uu dhibku soo gaarayo goor ay noqotaba. Waayo Soomaali waa mid, dalkeedu waa mid, cadowgeedu waa mid, doqonnimana waa isaga mid.
. Itoobiya ninkii moodaya saaxiib ama dad wax lala qaybsan karo, mucaahado lala geli karo dib ha u akhriyo taariikhda geeska Afrika, beydadka soo socda oo ka mid ahaa gabay aan ugu magacdaray “Xankakaabsi” ha akhristaan Faysal iyo ragga ku jaadka ah:
Xabiib jecel ninkii moodayow, Xabashi waa tiiye
Xurguftii horaan laga heshiin, xeerna loo dhigane
Xudduudihii la beensiyey baan, lagala xaajoone
Xukunkeeda waataan kunsano, xiiso loo qabine
Xalay dhalay maxaa idinka dhigay, Xabashi waa tiiye?
. Qabqabdhaafay bay laba qabiil qaran ku waayaane, SNM iyo qabaa’ilka u badan Somaliland waxay doonayaan in ay ka yeelaan Somaliland siday rabaan iyagoon tixgalin aragtida beelaha kale ee la degan gobalkaas. Puntaland iyo beelaha u badan deegaankaas waxay rabaan in ay siday doonaan ka yeelaan gobolkaas ilaa Puntland iyo Majeerteen ay noqdeen laba magac oo isku mid ah! Abgaal wuxuu yiri Xamar anaa iska leh, isla markaasna wuxuu ku doodayaa in ay tahay Caasimaddii Soomaaliya!! Adduunka ma jirto meel Caasimadda dalka beel gaar ah leedahay ama ka taliso. Shaatigaduudka RRAna wuxuu yiri haddii aanan ka talin lix gobol oo uu ula baxay South West Somali State wax heshiis ah oo aan cid la gelayo ma laha xataa RRA la heshiin mayo haddii aan madaxnimadii dhuntay markale la ii caleemasaarin!! Waxaa intaba ka yaab badan Isbahaysiga Dooxada Jubba oo iyagu aan gobolkaas wax taariikh hore ama deegaan midna ku laheyn ee xoog ku qabsaday. Isku soo duuboo ninkii xaq doonayaa xaqdarada ha joojiyo, xalkana meel uusan jirin yaan laga raadin.